Farmaajo oo buriyay heshiskii lala galay Badbaado Qaran | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo buriyay heshiskii lala galay Badbaado Qaran
Sida ay ogaatay Keydmedia Online, Farmaajo, wuxuu dallacsinta ka ilaaliyay saraakiisha ka tirsan xoogga dalka ee qeybta ka ahayd, kacdoonkii lagu diiday muddo kordhintii uu sameystay 12-kii April.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha mudadu ka idlaaatay Farmaajo, ayaa dhawaan dallacsiiyay in ka badan 170 Sarkaal oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, kuwaas oo aysan ku jiran Saraakiishii qeybta ka ahayd Ciidankii Badbaado Qaran, ee dalka ka badbaadiyay gacan kali talis.
Wareegto ka soo baxday Xaafiiska Farmaajo oo uu faafiyay Taliyaha Ciidanka Xoogga, Jenaraal Odawaa Yuusuf Raage, billowgii bishaan, ayaa lagu dallacsiiyay 174 Sarkaal oo u badan Kumaandooska Gorgor.
Saraakiisha darajada loo kordhiyay ayaa isku jira Saddex qaybood, kooxda 1aad, waa saraakiil loo adeegsaday caburinta Shacabka iyo siyaasiyiinta reer Muqdisho, kuwaas oo fuliyay weerarro ka dhan ahaa Madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiin miisaan culus leh.
Kooxda 2aad, waa ciidankii Caasimadda kula dagaalamay Badbaado Qaran 25-kii bishii April 2021, halka kooxda 3-aad, ay tahay Ciidamadii diyaaraha loogu daabulay gobola Gedo, kuwaas oo degaannada gobolkaas kula dagaallamay ciidanka Jubbaland.
Dhanka kale, Farmaajo wuxuu amray in xuquuqaadka laga jaro qaar ka mid ah saraakiishii Barbaado Qaran, sida Jenaraal Sheekh Yuusuf Indha-cadde iyo ilaaladiisa, kuwaas oo aan wax mushaar ah qaadan tan iyo billowgii bishii Juun.
Tallaabadaas oo ah beegsi gaar ah, ayaa burineysa heshiiskii Ciidankii muddo kordhinta ka soo hor jeeday looga saaray Muqdisho, kaas oo uu ku jiray qodob dhigayay in aan la beegsan karin isla-markaana aan lagu xad gudbi karin xuqaaqaadkooda.
Ciidamada Badbaado Qaran ayaa dhawaan isa soo dhex saaray guddi ay doonayaan in ay la fariistaan Ra’iisul Wasaaare Rooble marka uu dib ugu soo laabto dalka.